Mayelana neLanghai - Shanghai Langhai Printing Co., Ltd.
I-Shanghai Langhai Printing CO., Ltd.yinkampani yobungcweti enamafekthri amathathu ukwenza zonke izinhlobo zemikhiqizo yokupakisha, okuhlanganisa izikhwama ze-PVC/EVA, izikhwama zendwangu/i-jute, izikhwama ezingalukiwe, isikhwama sephepha, njll. imboni yokunyathelisa, indawo yokuhlanza indle kanye ne-QC Lab. Sinemishini eminingi ethuthukisiwe, efana ne-German Roland R904-7B yemibala emine kanye ne-R9055 yemibala emihlanu ye-offset press, i-Japanese Roybi 754 emine ye-offset press, Imigqa emihlanu ethuthukisiwe ye-5-ply Corrugated Board Production Lines, Imishini Yokuphrinta Ezenzakalelayo/Imishini Yokusika. , isinamathiseli sefolda esizenzakalelayo, Indawo ye-UV kanye Nomshini Wokuhlanganisa Ophelele, njll.
Uhlelo lokuphatha ukukhiqiza
Ngo-2004, inkampani yasebenzisa uhlelo lokuphatha ukukhiqiza lwe-ERP. Ukuqedwa kohlelo lwe-ERP kwenze inkampani yashesha futhi yasebenza ngempumelelo, yasheshisa ukusebenza kwangaphakathi kwebhizinisi, yaphinde yasindisa izindleko zokutshala imali zabathengi, yaqeda ukulahlekelwa kwezomnotho okubangelwa ukucatshangelwa okuhlangene, ukuvalwa kwezinto zokwakha kanye nokuphathwa okungalawuleki, futhi kuthuthukise kakhulu ukulawula okusendaweni, Londoloza amakhasimende amandla amaningi nezinsiza zezezimali. Zonke izinhlobo zedatha ehlobene nephrojekthi zingabuzwa ohlelweni lwe-ERP nganoma yisiphi isikhathi ukuze kuvinjelwe "ukungasebenzi kahle" kusixhumanisi sokuphatha.
Uhlelo lokuphatha lwe-ERP seluziguqule ngokuyisisekelo izingozi ezifihlekile ezake zahlupha ukuthuthukiswa kwamabhizinisi, njengokuhamba kancane kokudlulisa ulwazi kanye nokuzivumelanisa nezimo okubuthakathaka, futhi lenza ukuphathwa kwebhizinisi isinyathelo esikhulu esibheke emgomweni wokuphathwa kwesayensi, inqubo nesimanje.
Umkhiqizo + Abasebenzi + Ukuzinikela = Inani Lebhizinisi.
Hlela ukuziphatha ngendlela efanele ngohlelo, hlanganisa ithimba ngokuzwana, qhuba intuthuko ngomshini, shintsha isimo samanje ngamasu futhi ufinyelele imigomo ngesu.
Izinga lemikhiqizo lilingana nokwaneliseka kwamakhasimende ethu.
Ukwakha indawo "yobambiswano" ngesisekelo sezinzuzo "zokunqoba", ukuthola ukukhiqiza nokumaketha ndawonye ngenxa yesiphetho sethu esifanayo.
Ikhasimende kuqala, kusekelwe ubuqotho!
Ukwaneliseka kwekhasimende kuwumsebenzi wethu waphakade!